Honor 9X na 9X Pro na-ere ihe karịrị nde 10 na China | Gam akporosis
Ebe ọ bụ na ọ malitere na October afọ gara aga, Sọpụrụ 9X na 9X Pro Ha abụrụla ndị natara otuto site n'aka ndị na-azụ ahịa n'ihi ekele ha bara uru maka ego na-asọmpi na nke usoro ndị ọzọ dịka Redmi na Xiaomi, nke bụ ndị kachasị pụta na ngalaba a.
Ngwaọrụ abụọ a bụ ndị mbụ jiri nke Kirin 810, Ekwentị mkpanaka nke Huawei kwalitere maka etiti ya na nke ahụ egosila na ọ ga-enye otu n'ime arụmọrụ kachasị mma nke nso ya. Maka chipset na atụmatụ ndị ọzọ na nkọwapụta teknụzụ bụ nke ahụ abụwo ihe ịga nke ọma zuru oke na China, yana ihe karịrị nde 10 dị na mpaghara ahụ.
Dị ka ozi iji banye na akaụntụNke a bụ nnata nke usoro a na e rere ihe karịrị nde 3 n'ime ụbọchị 29 nke mmalite ya na China. Agbanyeghị, o were ihe dịka ọnwa asatọ iru nkeji nde 8, n'ihi asọmpi kpụ ọkụ n'ọnụ sitere na ndị asọmpi, yana ngwaọrụ ọhụrụ sitere na Honor na ụlọ ọrụ nne na nna ya Huawei.
Ọnụ ọgụgụ ahụ dị nnọọ ukwuu karịka ọ na-ezo aka na ewu ewu nke usoro na China. Cheta na nke a di kwa n'uwa nile. Ya mere, ọ nwere ike ị ruru nde ole na ole ọzọ. Agbanyeghị, onye nrụpụta a na-elekwasị anya na data nke mba ndị ọbịa ya, nke na-egbochi mmadụ ịmara omume ahịa nke ngwaọrụ na mpaghara ndị ọzọ.
Sọpụrụ usoro 9X dị na China
Na mgbakwunye, chipset ha na-etu ọnụ, ha abụọ nwere ihuenyo IPS LCD nwere mkpebi FHD + na nha nke 6.59 sentimita asatọ. Nhọrọ RAM na ROM na-amalite site na 4 GB na 64 GB na 8 GB na 256 GB, n'otu n'otu, dabere na ụdị nke ngwaọrụ ịhọrọ. Anyị na-ahụkwa ihe ntanetị igwefoto 48 MP na ọdụ abụọ ahụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Usoro Honor 9X bụ ihe ịga nke ọma ma rere ihe karịrị nde 10 na China naanị